Ny Valosoa, 15 Jolay 2017. Ivandry, Fifidianana 2018, ONU-Genève, Tim… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Antananarivo-Ivandry, 14 Jolay 2017. Fetin’ny Frantsay. Lalao sy Marc Ravalomanana.
Nametra-pialana Atoa Gervais Rakotoarimanana ministry ny vola. Démission du ministre des Finances. →
Ny Valosoa, 15 Jolay 2017. Ivandry, Fifidianana 2018, ONU-Genève, Tim…
Ambasadaoro Véronique Vouland
Nandritra izany , nisy ny kabary fiarahabàna sy fanehoana fisaorana ho an’ireo rehetra nahatontosa ny fety fankalazàna ny fetim-pirenena , mpiasan’ny ambasady, ny mpiara-miombon’antoka ary ireo vahiny nasaina rehetra nataon’ny ambasadaoro miasa sy monina eto Madagasikara Veronique Vouland – Aneini . Ankoatra izay , niompana tamin’ny lohahevitra maro ny kabary nataony , toy ny fiaraha-miasa ara-diplaomatika eo amin’ny firenena roa tonta , fanabeazana , lafiny fiovaovàn’ny toetr’andro , eo amin’ny lafiny ara-toekarena ary indrindra eo amin’ny lafiny ara – politika . Vao nahavita ny dingana rehetra momba ny fifidianana i frantsa , Madagasikara koa dia hiditra amin’izany .
Maniry mafy izahay hoy Veronique Voulan fa izany fifidianana izany dia efa ao antsain’ny maro dia ny fifidianana hanamafy ny famaharan’ny firenena ao amin’ny demokrasia , fifidianana mitaratra ny safidy malalaka eo amin’ny vahoaka Malagasy ary ho fifidianana Mangarahara sy Tsy Manavaka tsy hanembatsembana ny fahamarinan-toeran’ny firenena sy ny fahamarinan’ny olona .
Fanomanana fifidianana: efa mirona amin’izany ny ankolafy rehetra
Ny hetsika rehetra ataon’ny politisiana gasy amin’izao herintaona sy enim-bolana mialohan’ ny fifidianana ny taona 2018 izao dia efa mizotra any amin’ny fanomanana izany sahady. Tsy ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ihany fa eo koa ny an’ny solombavambahoaka. Ny mpitondra amin’izao Repoblika IV izao no miezaka mandresy lahatra ny vahoaka amin’ny fanaovana litania fa manao ezaka hampivoarana ho amin’ny tsaratsara kokoa ny fianam-pirenena amin’ny ankapobeny. Ny tsapa aloha hatramin’izao dia miantehitra amin’ny vola angatahina na samborina any ivelany ny mpitondra amin’ny fanatanterahina izany. Tsy misy vokatra azo tsapain-tànana anefa satria ny mpamatsy vola tsy matoky izao fitondrana izao noho ny fitantanana tsy mahomby sy tsy mangarahara eo amin’ny fampiasana ny vola.
Etsy an-kilany koa miantso ireo mpandraharaha avy any ivelany hampiasa ny volany eto Madagasikara kanefa manahy ny ho very vola ireo satria tsy azo antoka ny fandriampahalena. Marina fa hiteraka asa ho an’ny tanora malagasy ny fiavian’ireny mpandraharaha ireny kanefa laharampamehana ny fampiroboroboana ny indostria eto an-toerana aloha satria ny tombony ho azon’ny mpampiasa vola avy any ivelany dia haveriny any amin’ny firenena niaviany fa tsy hajanony eto velively.
Ny fitondrana koa ho fitsinjovana sahady ny mety ho fandreseny amin’izany fifidianana izany dia miantehitra amin’ireo rafitra najorony izay manana andraikitra mivantana na an-kolaka mifandraika amin’izany. Raha ny fijery azy ety ivelany sy ny fihetsiky ny Ceni tato ho ato anefa dia toa mitaky ny tena fahaleovantenany ka tsy manaiky ny tsindry ataon’ny mpanatanteraka aminy intsony. Ny mampanahy ny olompirenena anefa dia sao atao izany mody mba hampandriana adrisa manoloana ny fanakianana maro momba ny fanomanana sahady ny hala-bato. Efa nisy fitakiana ihany koa momba ny tokony hifidianana mivantana ny filohan’ny faritany sy ny faritra ary ny fokontany kanefa niniana tsy notanterahina izany satria azo antoka kokoa ny olom-boatendry noho ny trosa ara-moraly (dette morale) amin’ny mpanendry.
Ny zava-doza ataon’ny mpitondra amin’izao fotoana izao koa dia ny fiezahany hanolo Hvm ny ben’ny tanàna voafidim-bahoaka sasantsasany any ambany ravinkazo any ho fitsinjovany ny fifidianana ihany. Tsy vitan’izany fa misy koa ny fandatsahana ny ain’ny ben’ny tanàna tsy Hvm any amin’ny kaomininy hafa. Raha tena mitombina tokoa ny fandraisana andraikitry ny Ceni araka ny voalaza etsy ambony dia tokony hanaradia azy koa ny Hcc ka hijoro amin’ny fahamarinana ka hitsara ny toe-draharaha araka ny lalàmpanorenana tokoa. Efa manakaiky ny fanapahan-kevitr’ity andrim-panjakana ity tokoa mantsy ny momba ny fanendrena ny filohan’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimieram-pirenena. Efa fanomanana ny sain’ny vahoaka hifidy azy koa no ataon’ny mpitondra amin’izao fotoana amin’ny alàlan’ny fitokanana fotodrafitrasa sy ny fanampiana tampi-maso sy vonjitavanandro.
Mirona amin’izany fanomanana ny fifidianana ihany koa ny hetsiky ny mpitarika antoko politika na ny mpanohitra na ny mpanohana ny fitondrana. Tsy takona hafenina ny fahasahiranam-bahoaka amin’izao fotoana izao ka manararaotra izany ny mpanohitra izay miezaka manambatra ny heriny amin’ny fananganana vondrona kanefa tsy mety mifanara-kevitra sy miray hina noho ny fitiavana hitarika. Tsy vitsy ihany koa ireo namadika ny tolona niraisana ka lasa miaradia amin’ny mpitondra indray. Tsy azo hadino ireo midradradradra tsy mahandry izany fifidianana izany intsony satria mijaly ny vahoaka kanefa politisiana efa teo amin’ny fitondrana ihany izy ireny kanefa tsy nahomby ka tsy ilaina hiverina eo intsony. Tsapan’ny olompirenena izany toetsaina izany ka aty am-piandohana dia tsy masin-teny intsony ry zareo ary azo antoka fa ho very maina ny ezaka ataony. Ny politisiana manohana izao fitondrana izao moa dia tsy maharesy lahatra na inona na inona lazainy ary na inona na inona fanatsarana ny mpitondra.
Mbola hiverina hankalaza ny faha-15 taonan’ny TIM Antananarivo
Nitafa tamin’ny mpanao gazety ny Filoha Marc Ravalomanana ny alakamisy teo tetsy Analakely. Nivoitra nandritra izany fa manoloana ny resabe mandeha fa hosamborina izy dia nambarany fa tsy matahotra izany izy satria nanara-dalàna izahay hoy izy ka ny manara-dalàna indray ve no hosamboriana. Lalan’ny nandeha hody izy ny sabotsy 8 jolay lasa teo iny no narahan’ireo vahoaka marobe. Ankoatra izany, nihaona tamin’ny ambasadaoro Amerikana sy Frantsay ny tenany nanazava ny zava-nisy ka dia talanjona izy ireo raha nandre ny tatitra hoy i Dada. Nampanantena ny tenany fa mbola hankalaza ny faha-15 taonan’ny Tiako i Madagasikara (TIM) ny eto Antananarivo tsy ho ela. Mkasika ny tolo-kevitry ny CENI na ny vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny fifidianana ny amin’ny famerana ny vola holaniana amin’ny fampialezan-kevitra dia manaiky ny tenany satria ny vahoaka hoy izy no aoka hifidy izay olona tiany hitondra azy. Mety tsy hiankina amin’ny volabe tokoa ny fifidianana, rehefa tsy tian’ny vahoaka ny kandidà iray na handany volabe eo aza dia tsy ho lany mihitsy.
Mahamay ny ady tany ao Ambohitsilaozana
Mahamay tanteraka ny resaka ady tany ao amin’ny zetra ao amin’ny kaominina Ambohitsilaozana Ambatondrazaka amin’izao fotoana izao. Niakatra amin’ny sehatra ambonimbony kokoa ireo vahoaka ary nilaza fa tsy hanaiky mihitsy ny tsindry hazo lena ataon’ireo izay mikasa hampihatra izany. Fantatra fa hidina any an-toerana hijery akaiky ny raharaha ary hanao fanadihadiana ifotony ny mpitondra isan-tsokajiny avy ato ho ato ary hikatsaka izay vahaolana mety hampiravona ny raharaha. May volon-tratra rahateo ny rehetra satria vahoaka no mihetsika ary nilaza fa tsy hidiran’ny politika.
Efa ela izahay no niaro io zetra io ary nanompana ny herinay tamin’izany kanefa dia tadiavin’ny sasany hatao tantely afa-drakotra izany amin’izao fotoana izao hoy ireo mponina ao an-toerana. Nandefitra foana izahay hoy ihany izy ireo fa rehefa feno ny kapoaka dia tsy maintsy maneho ny hevitray izahay. Andrasana araka izany izay mety ho fiafaran’ny raharaha mahakasika izany ato ho ato.
Afrika Atsimo- Madagasikara
Hankalazaina ny 18 jolay ny International Mandela Day
Hankalazaina eto amintsika ihany koa ny International Mandela Day na ny Andro Iraisam-pirenena Nelson Mandela, toy ny amin’ny firenena rehetra eto amin’izao tontolo izao ny 18 jolay ho avy izao. Ao amin’ny Hotel Carlton Anosy no hankalazana izany amin’ny fomba ofisialy eto Madagasikara araka ny fanambarana avy amin’ny Masoivohon’i Afrika Atsimo eto amintsika. Ho fanamarihana izany ihany koa ny Ambasadin’i Afrika Atsimo dia hanatanteraka asa fandokoana sy fanomezana kits scolaires eny amin’ny Foibe na Centre Fanambinana, Soeur Marie Lucie Nanisana, eo akaikin’ny tranon’ny Masoivohon’i Chine eto Madagasikara, ny alatsinainy 17 jolay ho avy izao manomboka amin’ny 9 ora maraina. Izany asa sosialy hataon’ny Ambasady izany dia tafiditra tao amin’ny vinan’i Nelson Mandela tamin’ny fotoan’androny. I Nelson Mandela dia nigadra tany am-ponja nandritra ny taona maro noho ny fanoherany ny fanavakavaham-bolon-koditra tatsy Afrika Atsimo, vao tafavoaka ny fonja anefa izy dia lasa filohan’i Afrika Atsimo avy hatrany, ary nahazo ny loka Nobel momba ny fandriampahalemana. Anisan’ny olo-malaza indrindran’ny taon-jato faha-21 ity filoha Afrikana Tatsimo teo aloha ity.
Nitondra fanazavana momba ny zava-nitranga teny Ivandry
Nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Frantsay omaly 14 jolay teny amin’ny Masoivohon’i Frantsa teny Ivandry , dia nisy ireo olona izay tsy nahazaka ny hafanana sy ny fijorona ela teo am-piandrasana ny fiantombohan’ ny lanonana ka isan’izany ny Filohan’ny Antenimierandoholona Honoré Rakotomanana. Izany indrindra no nitondrany fanazavana mikasika ny toe-pahasalamany omaly tetsy amin’ny Lapan’Anosikely rehefa nanontanian’ny mpanao gazety. Nambarany tamin’izany fa naharitra ela ny fijoroana sy ny fiandrasana ny fiatombohan’ny lanona, teo ihany koa ny hain’andro ka izany no nitarika ny tsy fahasalamana kely izay nandalo taminy . Rehefa nojeren’ny mpitsabo teny an-toerana anefa izy , dia tomombana avokoa ny toe-pahasalamany fa ny siramamy ihany no somary latsaka. Taorian’izay , dia afaka nanatrika ny fizotran’ny lanonana soa aman-tsara ny tenany ary afaka nanohy ny asany tetsy amin’ny Lapan’Anosikely koa. Marihana fa tsy izy irery ihany no niharan’izany fa nisy ihany koa ny olon-kafa izay safotra mihintsy.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué 2018 Madagascar, Ceni, Droits de l'Homme Genève, Elections 2018 Madagascar, Ivandry Fête Nationale, Mandela Day, Marc Ravalomanana Ivandry, Mbs. Ajoutez ce permalien à vos favoris.